Soomaali / Su’aalaha soo Noqnoqda ee Quseeyo Xanuunka Koronofayruska (COVID-19)
Haddii aad weli su’aalo qabtid ka dib markaad akhrisay xogtan hoose, fadlan wac 651-632-3760 ama email u dir cinwaankan spc@spps.org si laguu caawiyo.
Wakhtigan isaga ah, fasaxii gu’ga wuxuu u dhacayaa sidii la qorsheeyay.
Inta iskoolku xiran yahay, waxaa furmayo xarumaha Health Start ee iskoollada Como Park, Harding, Highland Park, Johnson iyo Gordon Parks oo laga heli karo daryeel, caawin nafaqo, kaalmada caafimaadka dhimirka, iyo waxbarashada caafimaad-qabka. Fadlan booqo https://www.spps.org/Page/38688 oo arag saacadaha iyo wixii faahfaahin dheeraad ah.
Haa, qoysasku waxay maalin la isla og yahay cuntada ka qaadan karaan goobta uu baska SPPS soo istaago ama meel iskool ah. Jadwalka cuntada oo dhammeystiran iyo faahfaahin kaleba fadlan booqo: https://www.spps.org/Page/38722
Cunnada waxaa laga qaadan karaa iskoolka nus saaca hore ee uu caadiyan iskoolku furan yahay maalmaha Arbacada, Khamiista, ama Jimcaha taas oo ay ku xiran tahay jadwalka iskoolka. Fadlan ka akhriso jadwalka oo dhammeystiran halkan: https://www.spps.org/Page/38722
Waaxda Saint Paul Community Education ayaa caruur-hayn bilaash ah u samayn doonto caruurta da’doodu tahay 5-12 jir ee ay dhaleen shaqaalaha caafimaadka iyo dadka gurmadka ah ee ku nool xudduudda Saint Paul School District. Waxaa macquul ah in lagu weyddiiyo caddeynta shaqada.
Saacadaha, xarumaha, iyo is-diiwaan-gelintaba ka booqo: https://www.spps.org/ekidscare